Thursday May 11, 2017 - 10:39:11 in Wararka by Super Admin
Dalka Soomaaliya dhammaan gobollada dalka Abaartii ayaa dhammaatay waxaana bilaawday Xilli Roobeed Aaran ah, dad badan oo xoolihii ka dhammaadeen ayaa bilaabay in ay dhulka tacbadaan halka beeralaydii hore ay iyana shaqadooda dib u bilaabayaan.
Socdaal gaaban oo Wariyaal katirsan Idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan ay ku mareen qeybo kamid ah deegaannada Wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha hoose waxay kusoo arkeen barwaaqo ballaaran oo uu Alle siiyay dadka Muslimiinta.
Biyaha Roobka ayaa fadhiya wadooyinka, waxaana isbedel laga dareemayaa dhirta ka baxda hareeraha wadooyinka oo aad u cagaartay.
Beeraleyda ayaa durbaba bilaabay iney tabcaan beeraha islamarkaana ku abuuraan dalagyada kala duwan ee laga isticmaalo dalka Soomaaliya.
Akhri: 30 Kamid Ah Lataliyaasha Gaarka ah Ee Trump oo iscasilaad Ku dhaqaaqay 12 Bilood gudahood.
Sawirro: Alkalbaani Oo Daah Furay Ciyaarta Qammaarka iyo Shaneemadii Ugu Horraysay Oo Sacuudiga Laga Furayo.